ချင်းတောင်ထွက် မျောက်ငိုသီးများ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် အရောင်းသွက်ပြီး အိန္ဒိယမှ ဈေးကောင - Yangon Media Group
ချင်းတောင်ထွက် မျောက်ငိုသီးများ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် အရောင်းသွက်ပြီး အိန္ဒိယမှ ဈေးကောင
တီးတိန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာများတွင် စိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် ရာသီပေါ်သီးနှံ မျောက်ငိုသီးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်နှင့် မဏိပူရပြည်နယ်တို့မှ ဈေးကောင်း ပေးဝယ်ယူနေသည့်အတွက် ချင်း တောင်နှင့် ကလေးဒေသမှ မျောက်ငိုသီးစိုက်တောင်သူများတွက်ခြေ ကိုက်အမြတ်ရလျက်ရှိကြောင်း ချင်း ပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ် ဆိုင်းဇန် ကျေးရွာမှ ဦးကျင်ရှင်းထန်က ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်ကပြောသည်။
ယခင်နှစ်များက မျောက်ငိုသီးပင်ကို ကလေးမြို့နယ်တွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးရောင်းချခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များမှအစပြု၍ ချင်းပြည် နယ်တီးတိန်မြို့နယ်တွင် စိုက်ပျိုးလာပြီး ယခုနှစ်တွင် တီးတိန်ဒေသထွက် မျောက်ငိုသီးများလှိုင်လှိုင် ပေါ်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် တမူးနယ်စပ်နှင့်ရိဒ်နယ်စပ်များသို့ တင်ပို့၍ ထိုမှတစ်ဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းသို့ ရောင်းချကြသည်။
”ကျွန်မတို့ မဏိပူရပြည်နယ်ဘက်မှာ မျောက်ငိုပင်စိုက်လို့မဖြစ်ထွန်းပါဘူး။ အခုစမ်းသပ်စိုက် ပျိုးမှုတော့ရှိနေပါတယ်။ နှစ်စဉ် မြန်မာပြည်ဘက်ကလာတဲ့ မျောက်ငိုသီးကို ဝယ်ယူစားသုံးရပါတယ်။ တမူးမြို့ဘက်ကလာတဲ့ မျောက်ငိုသီးကို မြန်မာလက်ဆောင် ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်မဘက်အထိ တင်ပို့မှုရှိပါတယ်”ဟု မဏိပူရပြည်နယ် မိုးရေး မြို့မှမျောက်ငိုသီးပွဲစားဒေါ်လက်ခ်ျမီးက ပြောသည်။
ယခုရက်ပိုင်းတီးတိန်ဒေသတွင် မျောက်ငိုသီးတစ်တောင့်လျှင် ငွေကျပ် ၅ဝ မှ ၇ဝ အထိ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ဈေးပေးရ ပြီး တမူးနယ်စပ်တွင် မျောက်ငိုသီးတစ်တောင့်လျင် မြန်မာငွေကျပ် ၁ဝဝ မှ ကျပ် ၁၅ဝ အထိ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကာ ယခုရက်ပိုင်း မြန်မာ-အိန္ဒိယ ငွေလဲနှုန်းမှာ အိန္ဒိယ ၁ဝဝ ရူပီးလျှင် မြန်မာငွေ ကျပ် ၁၉ဝဝ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဗန်းမော်မြို့နယ်တွင် ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ နှစ်ဦးထံမှ ဘိန်းဖြူဆပ်ပြာခွက်နှင့် စိတ်ကြွဆေးပြား?
မြိတ်မြို့၌ WY စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ခုနစ်သောင်းကျော်နှင့်အတူ သေနတ်တစ်လက်၊ ကျည် ၃၂ တောင့် ဖ??
” မိဘမဲ့ကလေး ၄၆ ယောက်ကို ရှင်ပြု၊ နားသ အလှူတော်မင်္ဂလာ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ” ခိုင်နှင်းဝေ
စစ်တွေမြို့သစ် စီမံကိန်းမြေကွက်များ စတင်ရောင်းချခဲ့သည့် ဆယ်ရက်အတွင်း မြေကွက် ၂ဝဝ ကျော် အေ??
သမဂ္ဂမြက်ခင်းပြင်တွင် သမိုင်းပြတိုက်ပေါ်ပေါက်ရန် ကျောင်းသားများဆန္ဒရှိ
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် သဘင်ရာသီသစ်တွင် မန္တလေး၌ ဇာတ်အဖွဲ့သစ် တိုးလာနိုင်၊ ဇာတ်တည်ထောင်ခွင့်ရပြီး ဇာတ်??